Ukwenza amakhomphyutha kuwo wonke umuntu! - Isikhungo se-EcoTechnology
Ukwenza amakhomphyutha kuwo wonke umuntu!
Ubuwazi ukuthi awudingi igceke, noma isikhala ngaphandle, ukufaka umquba ekudleni kwakho? Ungakwazi ukufaka umquba ngaphakathi kwekhaya lakho usebenzisa izibungu! I-Vermicomposting isebenzisa izikelemu kanye nezilwanyana ezincane ezikhona ngokwemvelo ukuguqula imfucumfucu yakho yasekhishini neyamagceke ibe yi-humus ecebile enomsoco, noma umquba, ongayisebenzisa ukusiza izitshalo zikhule .
I-Vermicomposting ayakhi nje kuphela umkhiqizo osezingeni ongawusebenzisa engadini yakho, ezitshalweni zendlu, noma otshanini, kodwa futhi kungakongela imali ngokunciphisa izindleko zokukhipha udoti. Futhi kunomthelela omuhle emvelweni! Ukugcina imfucumfucu yokudla neyadini ngaphandle kukadoti kunciphisa kokubili ukukhishwa kwekhabhoni okuhambisana nokuthuthwa kukadoti kanye nokukhishwa kwe-methane okukhiqizwa lapho imfucumfucu yemvelo ibola ngokweqile endaweni yokulahla udoti.
Ukuze uqalise, okokuqala udinga umgqomo womquba. Ungathenga imigqomo ye-vermicompost, efana ne- Ngingakwazi O 'Izikelemu, noma ungazenzela kalula ngokulandela lezi zinyathelo!
Uzodinga imigqomo epulasitiki emi-2 noma ngaphezulu noma amabhakede. Eyodwa kuzoba yokuhambisa amanzi kanti okusele kuzosetshenziselwa ukwenza umquba wakho!
Sebenzisa isibhobozi ukwenza izimbobo zomoya (¼ intshi) ezinhlangothini zomgqomo (o) ozoba nomquba nomsundu. Emigodini efanayo yemigodi () intshi) ezansi ukuvumela ukukhishwa kwamanzi. Uma unemigqomo engaphezu kweyodwa yomquba, izimbobo zokuhambisa amanzi zizovumela nezikelemu ukuhamba phakathi kwemigqomo.
Faka imigqomo enemigodi emgqonyeni wamanzi. Ungaqoqa la manzi (“itiye lomquba”) bese uwasebenzisela ukunisela izitshalo zakho!
Isinyathelo esilandelayo ukudala indawo yokuhlala yezikelemu zakho! Indawo ohlala kuyo kufanele ibe nesilinganiso sezingxenye ezi-3 “esinsundu” engxenyeni eyodwa “eluhlaza.” "AbakwaBrown" bacebile ngekhabhoni kanti "imifino" icebile nge-nitrogen. Bona ishadi elingezansi ukuze uthole izibonelo zalowo nalowo.
Onsundu (ocebile ngekhabhoni) Okuluhlaza (okunothe nge-nitrogen)
izinaliti zikaphayini / izigaxa
amahlumela / amagatsha aqoshiwe
izikhwebu / izikhwebu zommbila
izikhwama zamaphepha ansundu
ukusika utshani okusha
utshani nokhula wensimu
izindawo zekhofi / izihlungi
amacembe etiye nezikhwama
izimila zasolwandle kanye ne-kelp
Ungangezi: Inyama namathambo, ubisi, u-anyanisi, uwoyela, amawolintshi, izinongo, ipulasitiki noma amakhemikhali.
Uma usudale indawo yakho yokuhlala, isinyathelo sokugcina ukufaka izibungu! Kufanele usebenzise izikelemu ezibomvu ze-wiggler (I-Eisenia fetida), engathengwa online. Kufanele kube khona I-1lb yezibungu kunyawo ngalunye lwesikwele lomquba. Izikelemu zingadla cishe ½ isisindo sazo ngosuku, ngakho-ke uma unezikelemu eziningi, imfucumfucu yokudla kanye negceke ingaphezulu ngesikhathi.
Gcina umquba wakho endaweni epholile, enethunzi, njengaphansi kwekhawunda noma egumbini elingaphansi. Izinto zokwakha kufanele zibe mswakama njengesipanji esikhishiwe. Uma umquba wakho uqala ukuhogela, kungenzeka kungenxa yokushoda kwe-aeration, imfucumfucu eningi kakhulu yezikelemu ukuphatha, noma umquba ungoma kakhulu. Sebenzisa ibhodlela lokufafaza ukwengeza amanzi uma lomile kakhulu noma ujike umquba uma umanzi kakhulu.
Lapho usukulungele ukuqeda umquba wakho, uzodinga ukusetha indawo yokuhlala entsha yezikelemu zakho. Uma usebenzisa indlela egqinsiwe, ungavele uqale ukondla ungqimba olusha bese uyeka ukondla ungqimba wokuqala, bese izibungu zilandela ukudla. Uma unomgqomo owodwa kuphela, hambisa yonke impahla ohlangothini olulodwa, yeka ukondla le ngxenye, bese uqala indawo yokuhlala entsha ngakolunye uhlangothi. Izikelemu zizoya endaweni entsha yokuhlala. Umquba uzobe usulungele ukuvuna futhi usebenzise ezitshalweni zakho noma yikuphi kusukela emavikini ayisithupha kuya kwayi-6 ngemuva kokuyeka ukuwondla!
By Isikhungo se-EcoTechnology|2017-10-30T09:48:48-04:00Kwangathi i-17th, i-2017|Ukuqukwa komquba, Ukusingathwa Kokudla, Ukusimama, Ukudonswa Kwezimfucuza|